Chitsidzo Chokusaita Zvepabonde Usati Waroora Kana Kuroorwa—Chinobatsira Here? | Vechiduku Vanobvunza Kuti
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kazakh (Arabic) Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Lingala Lithuanian Malagasy Malay Malayalam Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Norwegian Nzema Oromo Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sepedi Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tiv Turkish Ukrainian Umbundu Uzbek Uzbek (Roman) Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Kuita Chitsidzo Chokusaita Zvepabonde Usati Waroora Kana Kuroorwa Kunobatsira Here?
Chitsidzo chacho chinoitwa sei?
Kuita chitsidzo ichi kunobatsira here?
Ndezvipi zvinonyatsobatsira zvaungaita?
Kune dzimwe nyika vamwe vanoita chitsidzo chekusaita zvepabonde kusvikira varoora kana kuroorwa. Vanoita izvi nekupa mhiko yakaita zvekunyorwa kana kuti vachiita zvengokutaura.
Tsika iyi yakanyanya kukurumbira mumakore ekuma1990 chechi inonzi Southern Baptist Convention yekuUnited States payakatanga chirongwa chainzi “True Love Waits.” Chirongwa ichi chaishandisa zvimwe zviri muBhaibheri kukurudzira vechiduku kuti vasamhanyira kuita zvepabonde vasati varoora kana kuroorwa uye kuita kuti vakurudzirane ivo pachavo.
Pane chimwewo chirongwa chakarerekera kunyaya iyi chakazotevera uye chaipa vanenge vaita chitsidzo ichi rin’i yesirivha iyo yairatidza vamwe (uye yaivayeuchidza ivo pachavo) nezvechitsidzo chavakaita.
Vanhu vanotaura zvakasiyana-siyana panyaya iyi.
Vamwe vaongorori vanonzi Christine C. Kim naRobert Rector vakati, “zvakabuda mutsvakurudzo dzakawanda zvinoratidza kuti vanhu vakawanda vanoita chitsidzo chekusaita zvepabonde vasati varoora kana kuroorwa panguva yavanenge vachiri kuyaruka havawanzomhanyiriri kuita zvepabonde vachiri vadiki.”
Imwe ongororo yakabudiswa neGuttmacher Institute, inoti “vechidiki vanoita chitsidzo chekusaita zvepabonde vasati varoora kana kuroorwa havana pavakasiyana nevanenge vasina kuita chitsidzo chacho.”
Nei vaongorori vaine maonero akasiyana panyaya iyi?
Dzimwe ongororo dzinoenzanisa mapoka maviri ane maonero akasiyana panyaya dzepabonde, boka revakaita chitsidzo nerevasina.
Dzimwe ongororo dzinoenzanisa mapoka maviri ane maonero akafanana panyaya dzepabonde, boka revakaita chitsidzo nerevasina.
Zvii zvakabuda muongororo yakaitwa pavanhu vane maonero akafanana? Dr Janet Rosenbaum nyanzvi inoongorora nyaya dzeutano hwevari kuyaruka, vanoti ukazotarisa pashure pemakore 5, unoona kuti “hapana kana musiyano unenge uripo pakati pevanhu vakaita chitsidzo nevaya vanenge vasina pamaonero avanoita nyaya dzepabonde.”
Zvirongwa izvi zvokutsidza kusaita zvepabonde munhu asati aroora kana kuroorwa zvine chinangwa chakanaka.Asi dambudziko riri pakuti zvirongwa izvi hazviiti kuti munhu aone zvazvakanyanya kunakira kuti azadzise mhiko yake. Dr. Rosenbaum vanoti, vakawanda vanoita mhiko idzi “havazorarami zvinoenderana nemhiko dzavo.” “Nyaya yokusaita zvepabonde munhu asati aroora kana kuroorwa inofanira kuitwa zvichibva pasi pemwoyo wako kwete kungozviita nokuti unenge uine chirongwa chawakajoina.”
Bhaibheri rinokurudzira kuti munhu azvisarudzire zvichibva pasi pemwoyo kwete kuita chitsidzo chakaita zvekunyorwa kana kuti chokuudza vamwe. Rinoita izvi nokubatsira munhu kuti ‘aite kuti simba rake rokunzwisisa rirovedzwe kusiyanisa zvakanaka nezvakaipa.’ (VaHebheru 5:14) Chikonzero chikuru chokuti munhu arege kuita zvepabonde asati aroora kana kuroorwa ndechokuti anenge achida kuremekedza Mwari uyo akatanga nyaya dzewanano, kwete kutyira kuti angazobatwa nezvirwere kana kuti angazobata pamuviri.​—Mateu 5:19; 19:4-6.
Zvinotaurwa neBhaibheri zvinotibatsira. (Isaya 48:17) Kutaura zvazviri, vanhu vemazera ese vanogona kuteerera murayiro waMwari wekuti “tizai ufeve,” vasingadzokeri kumashure. (1 VaKorinde 6:18) Pavanozoroora kana kuti kuroorwa, vanenge vasununguka kuita zvepabonde uye havazozvidembi sezvinowanzoita vaya vanoita zvepabonde vasati varoorana.
Iva Nechokwadi Chekuti Kuzvibata Kwakanaka
Kana ukabvunzwa kuti: ‘Hauna mukomana?’ unogona here kutsanangura zvaunotenda uchishandisa Bhaibheri?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kuita Chitsidzo Chokusaita Zvepabonde Usati Waroora Kana Kuroorwa Kunobatsira Here?
ijwyp nyaya 50